GDF Taxanaha Taageerayaasha Tuubada leydi
Dabeecadda wax soo saarka 1. Sharaxaadda tusaalooyinka taageerayaasha 2. Taxanaha GDF -ka ee mareeyaha leydi, waa shirkaddeennu waxay nuugtaa nooc ka mid ah hawo -qaade cusub oo farsamo sare oo shisheeye oo aasaaska ah uu yeesho wuxuu noqdaa, waxay leedahay astaamo badan oo wanaagsan, sida naqshadda sheekada, qaab -dhismeedka is haysta, mugga yar, miisaanka fudud, buuqa yar, waxqabadka wanaagsan, shaqada joogtada ah, iyo rakibidda habboonaanta. Waxaa si weyn loogu adeegsan karaa hoteellada, isbitaallada, jimicsiyada, maktabadaha ...
WKF Taxane Shell-yar Fan
Taageeraha qolofka-yar ee taxanaha WKF waxaa laga soo hindisay xag dhaqaale, hufnaan iyo meel-badbaadin meel-shaqayneed oo ma laha xaddiga uu leeyahay taageere dhexe oo dhexe. Waxaa inta badan loo adeegsadaa aagga bannaan ee xiran ama mashiinnada daaweynta hawada ee dhismayaasha, iyadoo siineysa hawo cadaadis u leh deegaanka oo dhan oo ku dhex jira, sidaa darteed marinnada hawada waxaa loo oggol yahay inay ku xiraan mashiinnada daaweynta hawada dhinac kasta. Naqshadeynta noocaas ah waxay badbaadineysaa boos sababtoo ah ma jiro cod -weyne taageere, qaybta beddelka iyo qaybta ballaarinta gudaha mashiinka daaweynta hawada. Astaamaha gaarka ah ee badeecaddu waa sida soo socota:
YF Taxanaha Ventilator Centrifugal ee Jikada
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo -mareenka: 2.Foolasha rakibidda caadiga ah ee hawo -mareenka sida shaxdu muujiso 3.Beecadu waxay ka samaysan tahay taargooyin bir ah oo tayo leh, ka dibna buufinta electrostatic c Sidoo kale waxaa laga samayn karaa taargooyin bir ah oo galvanized ah. Qaybaha firaaqada waa la sameeyay. Kulanka ugu dambeeya waxaa lagu sameeyaa xariiqda kulanka. Faa'iidooyinka ugu waaweyn waa farsamooyin horumarsan oo soosaarid ah, sida soo-rogid gujinaya cadaadis, qolof hoosaad, riveting iyo iwm. 4. Hawo-mareenku wuxuu la socdaa FC multi-blade i ...
XFPY Xakamaynta dabka iyo qiiqa dabaysha qulqulka qulqulka qulqulka
Dabeecadda wax soo saarka 1. Tilmaanta Moodhalka: 2. Taxanaha XFPY dabka qulqulka qulqulka qulqulka dabaylaha waa nooca cusub ee aan horumarinno annagoo nuugnay farsamooyinka horumarsan ee badeecadaha la midka ah ee shisheeyaha waxayna leeyihiin astaamo waxqabad aad u fiican, iska caabin heerkulka sare ah, karti sare, raad yar 3. XFPY taxanaha dabka xakamaynta dabka heerkulka sare ee qiiqa qiiqa hawada qulqulka qulqulka waxaa tijaabiyay u qalma “Xarunta Qaranka Shiinaha ee Tayada Su ...